धुवाँ हानिकारक छ - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
धुवाँ हानिकारक छ | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
धुवाँ हानिकारक छ
by रमेश भण्डारी February 29, 2020
“बल्खु, कलंकी, सितापाईला, स्वयम्भू, माछापोखरी, बालाजु, नयाँ बसपार्क” भन्दै खलासी गाडीमा एकतमासले ठोकिरहेको थियो । खचाखच भिड भएको सानो गाडीमा आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न मानिसहरु तछाड-मछाडका साथ भित्र पस्न हतारमा थिए । “दाइ अलि भित्र जानु न, दिदी उता फर्किनु न, दुई लाइन भएर बस्नु न” भन्दै खलासी अनुनय बिन्ती बिसाइरहँदा दसैँमा मामाघर जाँदा हुने गाडीको भिडको सम्झना हुन्थ्यो । जसो-तसो खुट्टासम्म राख्न ठाउँ पाएकोले मपनि त्यस भरीभराउ गाडीमा छिरेँ ।
कुनैबेला मन्दिरै मन्दिरको उपनामले चिनिने काठमाण्डौँ शहर अहिले प्रदुषणयुक्त सहरको सुचिमा धेरै माथि छ । जताततै धुलो-धुवाँले काठमाण्डौँको स्वरुप दिन दुईगुना अनि रात चौगुनाको हिसाबले बिगारिरहेको छ। प्रायजसो युवाहरुले भरिएको त्यस गाडीमा देशको राजनिती देखि वैदेशिक रोजगारी सम्म,मेसि देखि कोहली सम्म, माया- प्रेम देखि विवाह र धोकासम्म साथै काठमाण्डौँको धुँवा-धुलो देखि अस्ट्रेलियाको सफा बाटोसम्म लगायत थुप्रै विषयमा समिक्षा भइरहेको थियो । सितापाइला पुग्दा सिट पाइयो, मुखमा कालो मास्क लगाएकी एक युवतीको छेउमा ।
“कस्तो धुवाँ-धुलो बढेको यो शहरमा, फोहरमैला उस्तै छ, गर्मी उत्तिकै बढेको छ। कस्तो शहर, कस्तो भयो ! धुवाँ कति हानिकारक छ भन्ने कुरा थाहा नपाए जस्तै गर्छन् काठमाण्डौँवासी ।”
“काठमाण्डौँमा बढेको जनसंख्याले नै त हो, प्रदुषण निम्त्याएको । हामी सुबिधाभोगी बढी भयौँ, सरकारले नयाँ नीति नियम लागू गर्नुपर्ने, भएकै लागू गराउन सकिरहेको छैन तथापि सबैभन्दा अगाडि त हामी आफैँ सजक र सचेत हुनु आवश्यक छ । परिवर्तनका संवाहक हामी आफैँ हौँ, सुरुवात आफैँबाट गर्न जरुरी छ।”
माछापोखरीमा उनी ओर्लनु अगाडि उनको कुरामा सहमति जनाउँदै मैले भनेको थिएँ । मास्क खोलेर मीठो मुस्कानका साथ बिदाईका हात हल्लाइन् उनले । बालाजु बसपार्कमा ओर्लिएर आफ्ना काम गरिसकेर म त्यो कोलाहल र प्रदुषणलाई छिचोल्दै वसन्तपुर पुगेँ । भूकम्पले चर्काएको छातीमा मलमपट्टी लगाउन व्यस्त थिए कैयौं कर्मठ हातहरु, चन्द्र र सूर्य अंकित झण्डा एकतमासले फरफराइरहेको थियो । काठमाण्डौँको मुटु अनि हरेक जोडिको ढुकढुकी नै मानिन्छ वसन्तपुर । यहाँ पुग्दा एउटा छुट्टै ठाउँमा पुगेको अनुभूति हुने गर्छ मलाई । नास्ता खान नजिकैको रेस्टुरेन्टमा छिरेँ । केही पर चिर-परिचित अनुहारले मलाई आमन्त्रण गरिरहेको थियो । संयोगवश, त्यो अनुहार तिनै युवतीको थियो, जसलाई मैले गाडीमा भेटेको थिएँ ।
हिमालझैं दन्तलहर खोलेर उनले यसपटक स्वागत गरिन् । “काठमाण्डौँको धुवाँले हामीलाई नजिक पो ल्याइपुर्‍यायो है” भन्दै त्यही टेबलमा बसेँ । एकैछिन हाँसोको फोहोरा छुट्यो । “मलाई लाग्दैन धुवाँले हामीलाई नजिक्याएको हो । नजिकिनुमा त यो रेष्टुंँराको हात छ है ।” हात अगाडि बढाउँदै उनले थपिन्,” मलाई लाग्दैन हामी अपरिचित छौँ, कसैसँग नजानिँदो पाराले आफै परिचय भइदिन्छ । परिचित हुन चाहिने सबैभन्दा ठूलो कुरा सोच नै हो, जुन केही हदसम्म मिल्दो रहेछ भनेर अघि गाडीमै थाहा भएको थियो । अनि, भन्नुस् किन भट्की हिँड्नुभएको छ, यो धुवाँग्रस्त शहरमा यसरी ? दिनहरु कसरी कट्छन् ?” एकै वाक्यमा उसले धेरैकुरा केही रमाइलो शैलीमा भनी । आजको भेट अविस्मरणीय हुनेवाला छ भन्ने अनुभव गरिसकेको मैले सक्दो काव्यिक सुनिन खोज्दै भनेँ, “दिनहरु कसरी बितिरहेका छ्न्, त्यो त स्वयं आकाशबाट हाम्रै निगरानी गर्ने रविलाई समेत थाहाछैन होला । तर पनि मनुवाहरु आँखाभरि आशाका लहरहरु साँचेर यो अन्धकारयुक्त शहरमा चहकिलो ज्योतिको पर्खाइमा छन् । कसैको के सपना होलान् कसैको के । कति यस्तापनि होलान् जो अस्तव्यस्त दैनिकीहरुको बिचपनि कवि बन्न लालायित भई चहारिरहेछन् यो प्रदुषित शहरको गल्ली-गल्ली ।”
Fantasy Art from Google
“अरे वाह ! टक्करकै मानिसपनि गाडीको ठक्करले गर्दा भेटिँदा रहेछ्न् । म ज्योति हुँ । हजुरबाट यस्तो जवाफको अपेक्षा थिएन, सायद कवि बन्न लालायित मध्य हजुरपनि एक पात्र हुनुहुन्छ क्या हो ! कुरो गराई सुन्दा त त्यस्तै लाग्यो नि ।” उनलाई अझै प्रभाव पार्न लवजमा भने,” देश अनुसारको भेष पनि हुनुपर्‍यो नि । हुन त कवि बन्ने चिज हो जस्तो भने लाग्दैन त्यो त आफैँ भित्र हुने कुरा हो तर पनि बेला-बेला लागिदिन्छ प्रयास गरे त निस्किने हो आफूभित्रको कुरा पनि ।” सायद म उसलाई आफ्ना शब्दले प्रभाव पार्न सफल भएछु, ऊ धक खोलेर हाँसिरहेकी थिई । जसले मलाई अझै खुलेर बोल्ने आँट दियो । भनेँ, “हाम्रो त नाम पनि मिल्दो रहेछ । म आकाश, तिमी ज्योती ! जसको आकाशलाई सधैँ जरुरत पर्छ ।” एकैछिनमा म हजुरबाट तिमीमा पुगिसकेको थिएँ । “फ्लर्ट गर्न त कोही हजुरबाट सिकोस् ।” भन्दै उनले के-के जाती अर्डर गरिन्, साथमा दुई कप कफीपनि भन्न पनि छुटाइनन् । “ए साच्चैंं, जहाँ पुग्दैनन् रवि, त्यहाँ पुग्छ्न् रे कवि, यसो एक दुईवटा कविता सुनेर कान पवित्र पारौँ न” भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरिन् । ” कविता त सुनाउन हुन्थ्यो नि तर के गर्नु जहाँ भन्यो त्यहाँ न कविता फुर्छ, न साइत जुर्छ । कविता सुन्न चाहिँ फोन गर्नुपर्छ है ।” भन्दै मैले उनलाई मेरो सम्पर्क नम्बर दिएँ । हाँसो-मजाक गर्दागर्दै नास्ता आइपुग्यो र हामी खान थाल्यौँ ।
“हजुर स्मोक गर्नुहुन्छ कि नाइँ” अचानक उनले सोधिन् ? सायद यो प्रश्न उनले जिस्किएर सोधेको हुनुपर्छ, “यसै त बाहिर यति धेरै धुवाँ छ, त्यसमाथि मलाई धुवाँ मनपर्दैन । अझै कतै पढेको थिएंँ एउटा चुरोटले ११ मिनेट आयु घटांँउछ रे । तिमीजस्ती राम्री मान्छेलाई छाडेर छिट्टै मर्ने रहर कसलाई पो हुन्छ र !” पहिलो भेटमा केही सोझो देखिने प्रयास गर्दै बाङ्गिएँ म । उनले वेटरलाई एउटा चुरोट ल्याउन अनुरोध गरिन् । “धेरै बाचेँर के नै पो गर्नु छ !” भन्दै उनले चुरोटमा आगो सल्काइन् । अघिसम्म धुवाँ कति हानिकारक हुन्छ भन्ने उनी, अहिले वसन्तपुरमा उडिरहेको धुवाँ भन्दा बढी धुवाँ उडाइरहेकी थिइन् । उनको आँखामा बेग्लै किसिमको भाव प्रस्फुटित देखिन्थ्यो । बेला-बेला उनले उडाएको धुवाँ सम्झन्छु अनि उनका चम्किला आँखामा हेर्दा मनमा लागेको आगो, फरक यही थियो उता जल्ने फोक्सो थियो अनि यता मुठ्ठी बराबरको मुटु । थाहा छैन हानी कुन धुवाँले कहाँ, कसरी अनि कति गर्छ तर धुवाँ हानिकारक भने पक्कै छ। सोचाई विपरीत अनि आशा विपरीत उनले उडाएको धुवाँले काठमाण्डौँको आकाशमा कालो बादल थपिरहेको थियो । हामी छिट्टै अर्कोचोटी भेट्ने छौंँ भन्ने वाचासहित उनीसँग छुट्टिएर म डेरातर्फ फर्किँदै गर्दा थुप्रै प्रश्नहरुले मेरो मथिङ्गलमा डेरा जमाइसकेका थिए ।
“नयाँ कुराहरु हुन्छ”, “देश विकासतर्फ लम्कदैँछ”, “अब रोजगारीको निम्ति विदेशिनु पर्दैन”, “अकालमा औषधीको अभावले कोही मर्दैन”, “काठमाण्डौँमा मात्र नभई देशभरी नै प्रदुषण कम हुनेछ” भनेर दिनहुँ हजारौं भाषण गर्ने नेताहरुको स्वरुप आँखै अगाडि आयो । हुन त यो मान्छे नचिनिने धुवाँले खासै फरक त के पार्दो हो, मुकुण्डो फरक-फरक भएपनि आखिर हामी सबैको अनुहार उस्तै त छ । तर मैले यस विषयमा कहिल्यै लेखिनँ । त्यो दिनपनि डेरा पुगेँ, अनि चुरोटको धुवाँले कोठालाई नै छोप्दै “धुवाँ हानिकारक छ” भन्ने विषयमा एउटा कविता लेखेँ ।